ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုရာဝယ်—။ (၁) ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာ ဘာလဲ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုရာဝယ်—။ (၁) ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာ ဘာလဲ???
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုရာဝယ်—။ (၁) ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာ ဘာလဲ???
Posted by mgwalone on Aug 18, 2013 in Business & Economics, Travel |3comments
“ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာ ဘာလဲ” ဆိုတဲ့ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့က လွယ်တယ်လို့ ပြောလို့ ရသလို ခက်တယ်ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက သာမန်အမြင်နဲ့ အလွယ်တကူ ပြောရင် သိပ်လွယ်တယ် လို့ ထင်ရပေမဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် အင်မတန် ကျယ်ပြန့်တာကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ပညာရှင်တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ကျင်လည်နေခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် အများသူငှာ နားလည်နိုင်မဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတာ ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုးလဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားသားတွေ ဘာကြောင့် လာကြ တာလဲ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဘယ်လို လုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာတွေကိ ပြောပြပါမယ်။ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များအားလုံး အမှားပါရင်၊ လိုအပ်တာရှိရင် ထောက်ပြ၊ ဝေဖန် အကြံပေးကြပါလို့ ကြိုတင် တောင်းပန်ပါတယ်။
စာတွေ အားလုံးဖတ်မရပါဘူး ။ ဘာfont သုံးထားလို့လဲတော့ မသိဘူး ။ လေးထောင့်ကွက်တွေဘဲ မြင်ရပါတယ် ။
ဇော်ဂျီပါပဲ။ ဘာလွဲသားသလဲ မသိ။ ပြန်တင်ထားပါတယ်။
အောင်မငီး ဆြာလေးရယ်… ကျေးဇူးကြီးပါပေ့ ..ဆက်ရေးပါဗျ … ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ အနာဂါတ်အပေါ်မှာ ဆြာလေးရဲ့ အမြင်လေးပါ ထည့်ရေးပါဗျာ ….